Homeसमाचारओली थप बलियो, प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिएपनि यसरी प्रधानमन्त्रीवाट ह’ट्दैनन् ओली
March 29, 2021 admin समाचार 2592
सर्वोच्च अदालते नेकपा भंग ग’र्नुभन्दा अघि सम्म नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजिनामा माग्दै स’डकमा थिए । उनलाई नेकपा एमालेका माधव नेपाल समुहले पनि साथ दिएको थियो । तर सर्वो’च्चले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय असंवैधानि भन्दै संसद ब्युझाइदिएपछि पनि प्रचण्डले सर’कारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् ।
आखिर प्रचण्ड’लाई के ले रोक्यो निर्णय लिन ? ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनिरहन उनले नै साथ किन दिइ’रहेका छन् ? एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि विभाजित भए पनि अहिले यी दुई पार्टीको संयुक्त सरकार छ। प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलि’एका कारण अप्रत्यक्ष रुपमा उनले ओलीलाई सघाइ’रहेका छन् ।
माओवा’दीले समर्थन फिर्ता नलिएकै कारण कांग्रेसले पनि सरकारको नेतृत्व गर्दै नयाँ सत्ता समिकरण बनाउने काममा चासो देखाएको छैन । ओली र कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा’बीच गोप्य सहमति भएको आशंका पनि गरिएको छ । ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भने चैत १० गते बसेको मा’ओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकले गरिसकेको छ तर पनि निर्णय कार्या’न्वयन भएको छैन ।
माओ’वादीसहित ओली सरकारलाई अहिले १ सय ७३ सांसदको समर्थन छ। सरकारमा रहन ओली’लाई १ सय ३८ सांसद चाहिन्छ। अहिले संसदमा रहेका नेपाली कांग्रेसका २ र जसपाका २ सांसद निलम्बनमा परेका छन्। नेकपा एमालेका १ सांसदको निधन भएको छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए ओली सरकारले विश्वा’सको मत लिन राष्ट्रपतिबाट समय पाउँछन्।
सामान्यतः सरका’रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ७ देखि १५ दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। यदि त्यो समयमा विश्वा’सको मत लिन प्रधानमन्त्रीले सकेनन् भने पदबाट मुक्त भएर कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीमा परिवर्तन हुन्छन्, त्यसपछि अर्को प्रधान’मन्त्रीको खोजी हुन्छ।’
नेकपा टुक्रिस’केकाले अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको हुने कानुनविदहरुको भनाई छ । ‘७६ (२) को प्रधानमन्त्री बन्न सकेन भने ७६ (३) को प्रधा’नमन्त्री हुन्छ। जुन संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको तर्फबाट बनाइन्छ ।
त्यो स’रकारले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ र लिन नसके संसद् विघटन गर्न पाइने उनको भनाइ छ। यदि ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले मिलीजुली सरकार बना’उन सकेनन् भने संसदको ठूलो दल भएकाले ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाउने’छन्।
संसदमा अ’हिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेको अवस्थामा बहुमत पुग्न सक्छ। तर तीन दलबीच स’हमति बन्न सकेको छैन । जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीसंग वार्ता जारी राखेको छ । यि तीन दल मिले मात्र बैक’ल्पिम सरकार बन्न सक्छ । तर दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेको कारण त्यो सम्भावना देखिएन । जसका कारण घुमिफिरी ओलीनै प्रधानमन्त्री हुने वा फेरी संसद वि’घटन हुन सक्ने संभावना छ ।
राष्ट्रपतिले बो’लाएको सर्वदलिय बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै अघि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरी संसद विघ’टन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । यि सबै कारणले गर्दा प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जोखिम नलिएको कानुनवि’द्को भनाई छ । – इताजा खबरबाट
June 16, 2021 admin समाचार 2130
April 7, 2021 admin समाचार 3054
May 12, 2021 admin समाचार 2892